WARBIXIN: Shanta Xiddig Ee Man United Ka Tirsan Ee Sida Gaarka Ah Uga Cadhaysan Heshiis Kordhinta Loo Samaynayo Ole Gunnar Solskjaer | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWARBIXIN: Shanta Xiddig Ee Man United Ka Tirsan Ee Sida Gaarka Ah Uga Cadhaysan Heshiis Kordhinta Loo Samaynayo Ole Gunnar Solskjaer
WARBIXIN: Shanta Xiddig Ee Man United Ka Tirsan Ee Sida Gaarka Ah Uga Cadhaysan Heshiis Kordhinta Loo Samaynayo Ole Gunnar Solskjaer
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu soo warramayaa inuu heshiis cusub oo saddex sano ah u saxeexayo kooxdaas xataa haddii uu ku fashilmo inuu wax koob ah kooxda ku guuleeyo xilli ciyaareedkan.
Tababaraha Norwegian-ka ah ayaa ahaa mid majaraha u hayay Manchester tan iyo December 2018 balse wali ma awoodin inuu wax koob ah ku guuleysto.
Man United ayaa hadda joogta wareega siddeeda ee Europa League balse xataa haddii ay ka hadhaan koobkaas ayuu heshiis kordhintiisa heli doonaa Ole oo haysta kalsoonida maamulka kooxdiisa.
Haddaba, iyadoo heshiiska cusub ee Solskjaer uu gaadhsiisnaan doono ilaa 2024 isla markaana mushaharkiisa 7.5 Milyan pound-ka ah la gaadhsiinayo 10 Milyan oo pound ayaanu halkan idinkula wadaagaynaa magacyada shan xiddig oo aan ku faraxsanayn warkaas.
Daafaca dhexe ayaa u muuqday mid horraantii xilli ciyaareedkan boos joogto ah helaya balse markale keydka u galay Victor Lindelof iyo Harry Maguire, heshiiska Bailly ayaa dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedka dambe, walow ay United wadahadalo cusub la furtay haddana waxa la filayaa inuu diido.
Ole ayaa kulankiisii ugu horreeyay ciyaarsiiyay Brandon Williams isaga oo ilaa hadda 36 kulan kasoo hoos ciyaaray, walow uu da’yarkaasi awood u leeyahay ka ciyaarista labada garab daafacba hadda Solskjaer ayaa u muuqda mid aan xiiso u qabin inuu xataa tartamada qaar ciyaarsiiyo, Williams ayaa qaab amaah ah ama rasmi ah mid ahaan ku tagi doona.
Van De Beek oo 35 Milyan oo pound ku yimid Man United xagaagii ayaan wax kalsooni ah ka haysan Solskjaer iyadoo hadda shaki ku jiro booskiisa Euro ee xulka Netherlands, Solskjaer ayaa u muuqda mid aan wali hubin booska ku haboon Donny waxaana uu gai doonaa laba mid ahaan oo kala ah ama inay xal raadiyaan ama in ciyaaryahanku baxo.
Walow uu Solskjaer soo dhawaynayo soo laabashada Jesse Lingard balse haddana hadaladiisii ugu dambeeyay ayaa ah kuwo muujinaya inuu fursad siin doono kaddib markii uu sheegay in 28 sano jirkaasi uu tartan toos ah kula jiro Bruno Fernandes oo kooxda hoggaan u ah.
Anthony ayaa ahaa mid si joogto ah booskiisa u haystay mudada uu Solskjaer kooxda joogay balse doonista weeraryahan cusub ee macalinka ree Norway ayaa ka dhigaysa mid aan faraxsanayn, doorka Martial ayay Red Devils si toos ah ugu calaamadsadeen Erling Haaland oo Borussia Dortmund ka tirsan.
bailly intaan ka aheen hala gado waa damiinyaal